Guddiga La-talinta ee Interbay ayaa furay Guriga 15-ka Maajo - Waaxda Ganacsiga ee Gobolka Washington
Bogga ugu weyn|Guddiga La-talinta ee Interbay ayaa furay Aqalka Maajo 15
Waxaa ku xigi doona taxane ah guryo furan oo dadweyne oo loogu tala galay mashruuc lagu baranayo dib-u-horumarinta aagga hub ee Ciidanka Qaranka ee Washington ee xaafadda Interbay ee Seattle.
OLYMPIA, WASH - Guddiga La-talinta ee Horumarinta Dadweynaha ee Waaxda Ganacsiga ee Washington ayaa qaban doona kulan kale oo taxane ah oo bulshada looga furayo 6 - 8: 30 wakhti dambe on Arbaco, May 15 Hall-ka Ballard VFW, 2812 NW Market St, Seattle, WA 98107.
Guriga furan waa fursad aan rasmi ahayn oo dadweynuhu ugula xiriiraan xubnaha guddiga iyo daneeyayaasha kale wixii ku saabsan cusbooneysiinta mashruuca iyo wadahadallada. Faallooyinka dadweynaha ee rasmiga ah waxaa lagu casuumay bilowga kulanka xiga ee joogtada ah ee Guddiga La-talinta ee Maajo 8. Si loo xafido meel loogu talagalay bandhigyada la diyaarinayo (oo aan ka badneyn seddex daqiiqo oo dheeri ah) kulanka guddiga, fadlan RSVP ee Ganacsiga interbay@commerce.wa .gov.
Waxaa la bilaabay Sebtember 2018, mashruucu wuxuu baranayaa dib u isticmaal suurtagal ah oo loogu talagalay goobta hadda ku taal Xarunta Qaranka ee Washington ee Seattle. Ganacsiga waxaa lagu soo oogay inuu isugu yeero guddiga la-talinta iyadoo la kaashaneysa Waaxda Milatariga si loo baaro isticmaalka ka iman kara hantida dowladdu leedahay ee ku taal Seattle ee xarunta wax soo saarka Ballard-Interbay haddii la helo ilo mustaqbalka si loogu oggolaado Ilaalada inay u guuraan meel kale goobta
Guddigu wuxuu soo jeedin doonaa talooyin laxiriira faa'iidada ugu sareysa bulshada iyo isticmaalka horumarka dhaqaalaha mustaqbalka ee goobta Interbay, waxayna sameyn doonaan talooyin ku saabsan kheyraadka si ay uga caawiyaan Ilaalada Qaranka Washington dib u dejinta suurtagalka ah.
The ajandaha kulanka, oo ay la socdaan macluumaadka kale ee guddiga, waxaa laga heli karaa websaytka Ganacsiga ee www.commerce.wa.gov/interbay. Wixii macluumaad dheeraad ah, kala xiriir Maareeyaha Mashruuca Interbay Sean Ardussi halkan 360-725-5039 or iska qor liiska boostada mashruuca. Waad beddeli kartaa dookhaaga boostada ama waad ka bixi kartaa wakhti kasta.
- Sean Ardussi, Maareeyaha Mashruuca, 360-725-5039
Xaafadda InterbayWar-saxaafadeedKulan dadweyneXoojinta bulshada
← Mashruuca Interbay - Dejinta qaab lagu guuleysto Ganacsiga wuxuu bilaabay barnaamijka "ScaleUp" si looga caawiyo ganacsiyada yaryar inay koraan →